China Penstrep Jekiseni 20% Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Per ml Kumiswa
Iyo antibacterial spectrum uye mashandiro eprostaine penicillin akafanana nepenicillin. Inonyanya kushanda pazvirwere zvine mwero uye zvakapfava zvinokonzerwa ne gram-positive cocci inoziva penicillin. Penicillin ine yakanaka yekurwisa mabhakitiriya kurwisa Streptococcus hemolyticus, Streptococcus pneumoniae, uye Staphylococcus iyo isingabudise penicillinase. Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Corynebacterium diphtheria, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Streptobacter candida, Listeria, Leptospira naTreponema pallidum vanoziva chigadzirwa ichi. Ichi chigadzirwa chinewo antibacterial chiitiko chinopesana neHaemophilus influenzae uye Bordetella pertussis. Ichi chigadzirwa chine yakanaka inorwisa mabhakitiriya maitiro kune anaerobic mabhakitiriya akadai seClostridium, Peptostreptococcus uye Bacteroides melanogaster, asi ine yakashata inorwisa mabhakitiriya maitiro kuBacteroides fragilis Penicillin inoridza bactericidal mhedzisiro nekudzivirira iyo synthesis yemabhakitiriya masero masvingo.
Dihydrostreptomycin yakakodzera kurapwa kwehutachiona hunokonzerwa nemhando dzakasiyana dzeGram-negative mabhakitiriya, akadai maantibayoti ane zvakanakira yakasimba bactericidal chiitiko, yakaderera chepfu, zviratidzo zvakakura uye kugona kwakanaka kwekiriniki.
Ine simba rekubatana painosanganiswa nemapenicillin kana cephalosporins.
Mhedzisiro yekurwisa mabhakitiriya yekirasi iyi yemishonga inowedzerwa mune alkaline nharaunda, uye musanganiswa wealkaline madhiragi (sodiyamu bicarbonate, aminophylline, nezvimwewo) anogona kuwedzera maitiro eanorwisa mabhakitiriya, asi huturu hwakawedzerwawo saizvozvo. Kana iyo pH kukosha kukapfuura 8.4, iyo inorwisa mabhakitiriya mhedzisiro.
AtionsCations senge Ca, Mg2 +, Nat, NH uye K inogona kudzvinyirira antibacterial chiitiko cheichi kirasi yemishonga.
Kusanganiswa ne cephalosporin, dextran, zvine simba diuretics (senge furosemide, nezvimwewo), erythromycin, nezvimwewo, zvinogona kusimudzira ototoxicity yekirasi iyi yemishonga.
KSkeletal mhasuru inozorodza (senge succinylcholine chloride, nezvimwewo) kana madhiragi ane mhedzisiro yakadaro anogona kusimbisa kushomeka kwemitsipa kwekirasi iyi yemishonga
Zvirwere, sekufema. Kunze uye alimentary turakiti hutachiona, Metritis, Mastitis, Osteomyelitis, peritonitis, Septicemia, Cysisisjoint-kurwara uye kwechipiri hutachiona hutachiona, mumabhiza, mombe, nguruve, mbongoro, mhuru makwai nembudzi
Dosage uye manejimendi
Intramuscular management: 1 ml pa25kg, Urarame huremo pazuva, kwemazuva matatu kusvika mana; Muzviitiko zvakakomba, muyero uyu unogona kupetwa kaviri
zunza mushe usati washandisa
Nyama / Nyama: Mazuva gumi / mazuva ;Mukaka / Mukaka: mazuva matatu
Chengetedza munzvimbo inotonhorera, pazasi pe25 ℃, kure nechiedza.
Pashure: Oxytetracycline Jekiseni 5%
Zvadaro: 10% Butaphosphan + Vitamin B Jekiseni
Gentamyclin sulphate jekiseni 4%
Amoxicillin jekiseni 15%
Analgin 30% jekiseni